Iphupha Nge-Ibis Discover ➡️ Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neIbis
I-ibis, ekwabizwa ngokuba yi-ibis, yintaka enomlomo omde, ogobile ohlala ikakhulu kufutshane namanzi. Kuba kulapho ifumana khona ukutya kwayo, okufana nezinambuzane zasemanzini, oononkala abancinci okanye imibungu yezinambuzane.
Kodwa ibis inokufumaneka nakwiindawo ezomileyo. Ezi ntlobo zikwahlule ukutya kwazo emanzini kwaye zikulungelelanisa nendalo yazo. Emva koko zitya kakhulu iintethe, ooqongqothwane okanye izigcawu, ezinokuthi zikhase ngemilomo yazo.
I-ibis ijongeka ngathi yingwamza, kodwa eyona nto ibalulekileyo ngomlomo wayo ojije ngokuqinileyo. Ukongeza kwimizekelo emhlophe, i-ibis 'plumage inokuba mnyama, mnyama okanye nokuba bomvu.
Ukuba uphuphe ikhonkco lehotele "Ibis", kuya kufuneka usebenzise iisimboli zamaphupha "Ihotele" okanye "Ubusuku" ekutolikeni.
1 Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika iphupha le-ibis ikakhulu njengophawu lwe isigqibo kunye nokunqwenela. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umphuphi kufuneka aqonde ukuba angathanda ukuphumeza iminqweno yakhe kunye nethemba lakhe el mundo ukuvuka kwaye uya kubambelela kubo ngokuqinileyo.
Ukongeza, intaka enomlomo ojijekileyo ingabonisa njengomfanekiso wephupha ukuba umntu ochaphazelekayo kungekudala uza kuba kumcimbi othile. inkxaso iyafunyanwa. Ukuba ubona iintaka ezininzi ze-ibis ngokunxulumene namanzi ngelixa zilele, oku kungabonisa ukuba kufanelekile ukuba uthi ndlela-ntle kwiminqweno ethile ebomini bakho. Kuba akunakulindeleka ukuba ziphunyezwe.
Ukuba ibis ifuna ukutya eludakeni ephupheni, oku kunokwenza ukuba umphuphi akufune. isisombululo uphawu kwisimo esime ngxi. Nangona kunjalo, ukuba intaka inamathela ngomlomo wayo ematyeni ukuze ibambe izinambuzane, umntu ophuphayo kufuneka azi ukuba angoyisa eyona miqobo mikhulu ngokuzingisa.
Ibis ephaphazelayo inokubonwa njengomfanekiso wephupha, ihlala inqwenelekayo ukuzimela kwaye babonakalise inkululeko. Mhlawumbi umntu ophuphayo uzama inkululeko engakumbi ebomini bakhe okanye sele efikile kweli lizwe. Nangona kunjalo, nabani na obona ibis efileyo ephupheni lakhe uhlala eboniswa ukuba baziva bethintelwe kubomi babo bokuvuka. Ke ngoko, utshintsho kwimeko yokuhlala lunokucetyiswa.
Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, umfanekiso wephupha "iIbis" kwiimeko ezininzi kubandakanya a Umyalezo ovela kokungekho zingqondweni. Ukuqonda kunokuvela ekuziqondeni komntu ochaphazelekayo, ekufuneka ajongane nako ngokusondeleyo ngokwenyani. Oku malunga noku kunokubhekiswa ngokubanzi kwiimeko zokuphila zangoku.
Ukuba ubona ibis ephupheni kunxweme lwedike okanye lomlambo, oku kuhlala kwenzeka kuwe ungquzulwano lwangaphakathi bhekisa. Kunokuba nzima ukuba umphuphi akhethe phakathi kwecala lakhe leemvakalelo kunye necala lakhe elilawulwa yingqondo.
Ukubamba ibis, mhlawumbi nasemgibeni, kunokubonisa njengophawu lwephupha ukuba umntu ophuphayo ufuna ukugcina ulawulo lwento ethile ebomini bakhe. Ukuba umntu oleleyo ubulala intaka enjalo ephupheni lakhe, uhlala engafuni ukujongana neengxaki zengqondo athe wazibeka ngempumelelo kude kube ngoku.
Uphawu lwephupha «Ibis» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "iIbis" inakho ngokwenkcazo yephupha lokomoya njengentaka ephupheni. Ubume bengqondo zibhekisa kumphuphi, ngakumbi umnqweno okhoyo.
Iphupha malunga neGabel
Iphupha malunga ne-KO Drops